Uhlelo lokusiza ngesomiso eBolivia | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa imvamisa kanye namandla esomiso emhlabeni jikelele. EBolivia, izinsiza zamanzi ziyindlala yingakho seziqala ukwenza amaphrojekthi osizo wokugcina amanzi nokunisela okunganxephezela isomiso.
Isomiso esenzeka eBolivia inzima kakhulu eminyakeni engama-25 edlule. Yimiphi imiklamo ekhona yokunciphisa izinkinga zesomiso?
Iphrojekthi ye-NGO Ayuda en Acción (AA) izama ukuqeda izinkinga zesomiso eBolivia futhi ithole Umklomelo We-IV Wokubambisana Nentuthuko, kuhlelo lwalo nyaka lwemiklomelo ye-José Entrecanales Ibarra.
Inhloko Yezobudlelwano Bezikhungo ze-AA, UMarta Marañón, nguyena oqoqe lo mklomelo ngesenzo esesiphethwe yiNkosi u-Felipe VI. Isizathu salo mklomelo ngumsebenzi omkhulu owenziwe kule phrojekthi unyaka wonke we-2016 esifundeni sase-Andesan i-Azurduy. Inhlangano Ayuda en Acción inikeza usizo lokwakha idamu elizosiza ekugcineni nokugcina amanzi esimeni sesomiso. Ngaphezu kwalokho, Bakwazile ukusiza amachibi ayi-colinar ayi-15 namachibi ka-ferro-simende angama-30 asevele enikeza amanzi kubantu abangu-2.000 XNUMX bendawo.
Amaphrojekthi amaningi enziwe kule ndawo ahluleka ngemuva kokuphothulwa ngoba awakwazi ukuqhubeka. Kodwa-ke, lo msebenzi uzoqhubeka kwazise umphakathi waseBolivia nguyena obambe iqhaza ekwakhiweni kwengqalasizinda kusukela ekuqaleni. Lokhu kukhombisa ukuthi yibo abazosebenza kanzima ukugcina ingqalasizinda nokuqinisekisa inhlalakahle yabo.
Ukuguquka kwesimo sezulu okudala ukoma okwandayo nokugcina amanzi kunzima emazweni amaningi omhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Uhlelo lokusiza ngesomiso eBolivia
Februwari 2017: kufudumele futhi kunomswakama kakhulu kunokujwayelekile